We Fight We Win. -- " More than Media ": ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ( ဟိန်း)
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ( ဟိန်း)
အသက်(၂၀)မှာ စာမူတွေကို ဒိုင်ခံဖတ်၊
အက်ဆေးတစ်ပုဒ်အတွက် ကျောင်းထွက်ခဲ့တဲ့ သူ့ကို
အခုတော့ ညလုံးပေါက် အရက်ဆိုင်တွေ ၊
ဂိမ်းဆိုင်တွေက ခနဲ့တဲ့တဲ့ ပြုံးတယ်။
ရင်ထဲ ဆို့ချင်စရာကြီး ။
ကျည်ဆန် ၁၃ တောင့်ရသွားတယ်။
သွေးအိုင်ထဲ လဲ နေတယ်။
ဘယ်တော့မှ မသေဘူး ။
( ငွေစက္ကူ ၊ နံရံပေါ် ၊ သီချင်းထဲ ၊ စာအုပ်ထဲ ၊ ပန်းချီထဲ ၊ နှလုံးသားထဲ ) ။
၉၇ နှစ်နှစ် ရှိပြီ .. ။
ခေတ် ( ၄ ) ခေတ်လောက်ရှိပြီ .. ။
အပ္ပမာဒေန ဘိက္ခဝေ သမ္ပာဒေထ
တိုင်းရင်းသား အပေါင်းတို့ မမေ့မလျော့ ကြကုန်နှင့်
သတိတရား နဲ့ ပြည့်စုံကြကုန် ။
I love this poem. Cool !
19 July 2012 at 03:38